दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने वर्गलाई राहत प्रदान गरेका छौं – गाउँपालिका अध्यक्षसँगको अन्तर्वार्ता – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने वर्गलाई राहत प्रदान गरेका छौं – गाउँपालिका अध्यक्षसँगको अन्तर्वार्ता
पोष्ट गरिएको असार. १८, २०७८ मा १०:३० मध्यान्ह असार १८, २०७८
अहिले सारा विश्व कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको धेरै समय भइसकेको छ । यस भाइरसबाट गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिका पनि निक्कै प्रभावित भएको छ । यस गाउँपालिकामा चाहिँ फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखापर्ने क्रम जारी नै छ ।
यस्तै महामारी नियन्त्रणमा गाउँपालिकाले कस्तो कार्य गर्दै आएको छ, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा के–कस्ता विकास निर्माणका काम गरेका छन् भन्ने लगायतका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।
अहिले कोरोनाका कारण विश्व नै आक्रान्त छ, कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ?
अन्य ठाउँमा जस्तै हाम्रो पालिकामा पनि कोरोनाको प्रभाव बढ्दो छ । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले पालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयासहरू जारी राखेका छौं । गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नागरिक सचेतना गराउँदै, अहिले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका छौं । कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीहरूको एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएका र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका बिरामीलाई होम आइसोलेसनमै सुरक्षित बस्नको लागि आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बारे सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा जनप्रतिनिधिहरू उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझ्दै आउनुभएको छ । हालसम्म पालिकामा १ सय ४७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
पालिकामा कोभिडका बिरामीलाई सहज होस् भनि एम्बुलेन्स पनि व्यवस्था गरेका छौं । पालिकामा १० बेडको आइसोलेसन कक्षको व्यवस्थापन गरी हाल यस आइसोलेसनमा ४ जना कोभिडका बिरामीहरू उपचाररत छन् । कोभिड परीक्षण गर्दा चाहिँ संक्रमितहरु देखापर्ने क्रम जारी नै छ । यस समयमा बाहिरी जिल्लाबाट पालिकामा प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नको लागि अपिल गरेका छौं । यस महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न सबै लागिपरेका छौं । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सतर्कतालाई अहिले पनि उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गराएको छ ।
चुनौती र समस्या त धेरै नै छन् । बर्खाको समय छ जटिल अवस्थाका बिरामीहरू भए भने उपचार गर्न पनि समस्या छ । पालिकामा बर्षायामको सुरुवातसँगै धेरै ठाउँमा बाढि पहिरो, भूक्षयको बढि प्रकोप हुने गर्छ । अन्य अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्नको लागि पठाउन पनि बाटो अवरुद्ध, खोलमा बाढिका कारण समस्या छ । कोभिडका बिरामीहरूलाई पालिकामा उपचार हुन सकेन भने धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, पोखरा, काठमाडौंसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
गाउँपालिकाले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने वर्गलाई राहत प्रदान गरेको छ । गरिब र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका ६० घरपरिवारलाई विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा राहत वितरण गरेका छौं भने केही व्यक्तिगत डोनेसनबाट पनि विपन्न परिवारलाई खाद्यन उपलब्ध गराएका छौं । विपन्न वर्गको लागि चामल, नुन, तेल आदि वितरण गरेका छौं भने अन्यलाई गरेका छैनौं ।
तपाईं गाउँपालिकाको प्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, यो अवधिमा पालिका भित्र के कति काम गर्नुभयो र कस्ता परिवर्तन आए पालिकामा ?
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आएपछि विकास निर्माणका कामहरू धेरै भएका छन् । हामीले अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि २०७८÷७९ को पनि बजेट ल्याएका छौं । स्थानीय सरकार अहिले प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका काम गर्दै आएको छ । नागरिकको आवश्यकता तथा समस्याको समाधान गर्ने हाम्रो कर्तव्य तथा दायित्व हो । पालिकाले देखिने खालको परिवर्तन भन्दा पनि न्यूनतम जनताको आधारभूत कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायतको क्षेत्रहरूमा परिर्वतन आएको छ । हामीले गाउँपालिका भित्रका अधिकांश नागरिकहरूलाई पालिकाको तर्फबाट सेवा प्रवाहमा न्यूनतम आधारभूत कुराहरू परिपुर्ति गर्नको लागि हाम्रो प्रयत्न जारी छ । विद्यालयको हकमा करिव ७० प्रतिशत भौतिक संरचनामा निर्माण गरी गाउँपालिकाले विद्यालय कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक काम गरेको छ । शिक्षकको दरबन्दी मिलान, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न वातावरण तयार गरेका छौं ।
हाम्रो पालिकामा ६ ओटा वडा छन् जसमध्ये हामी निर्वाचित भएर आउनुअगाडि २ ओटा वडामा स्वास्थ्यसंस्था थिएन भने हाल हामीले ती वडामा पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरिसकेका छौं । यस्तै कोभिड अस्पतालको रूपमा पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएको छ । स्थानीयको मागअनुसार भौतिक विकासको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै खानेपानीको हकमा ‘एक घर एक धारा’ सञ्चालन गरेका छौं भने आजको दिनमा ७० प्रतिशत घरधुरीमा ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी पुर्याउन पनि सफल भएका छौं । कच्ची सडक भएपनि सबै वडामा सडक सञ्जाल पुर्याएका छौं । गाउँपालिकाको कृषि शाखाले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय गर्ने, त्यसका लागि गाउँपालिकाले प्रारम्भिक काम अगाडि बढाएको छ । कृषि तथा पशुपालनमा पनि धेरै काम गरेका छौं ।
गाउँपालिका भित्र अब गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के–के छन् नि ?
हाम्रो कार्यकालमा गाउँपालिकाको आधारभूत कुरा तथा पूर्वाधारको तयारी गर्नको लागि हाम्रो समय तथा बजेट खच्किएको अवस्था छ । पालिकामा उत्पादकत्व वृद्ध गर्नको लागि यहाँका नागरिकहरूलाई उत्पादन तर्फ लगाउन चाहिँ जरुरी छ । औद्योगिक तथा व्यवसायी बनाउने हिसाबले कृषि पशुपालनलाई पनि व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । पूर्वाधारको काम गर्दागर्दै कृषि तथा पशुपालनमा हामीले भने जस्तो लगानी गर्न सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा उत्पादनसँग जोडने दियौं र यस तर्फ धेरै लगानी गयौं भने राम्रो काम हुने छ । विकास निर्माणको कामहरु पनि धेरै गर्नुपर्ने छ ।
स्थानीय सरकारमा काम गरेको ४ वर्ष परा हुँदा काम गर्दै जाँदा के– कस्ता चुनौती र समस्या आए त ?
स्वभाविकरूपले काम गर्दैगर्दा समस्याहरू आउँछन् नै । समस्यालाई सकेजति समाधान गरेर अगाडि बढेका छौं । सुरुमा सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैगर्दा ऐन तथा व
निजी आवास अनुदानको किस्ता लिन नयाँ डेडलाइन